MKV iyo MP4 leeyihiin farqiga aan wax badan, gaar ahaan marka ay timaado playbacks video. Lahaanshaha horumarinta kala duwan waxay leeyihiin mudnaanta qaar ka mid ah, sida aan ka arki faahfaahinta yar oo ka dhigi kara qaab kuwaas oo weel laba file mudan in dhinacyo badan. isagoo caddaymaha la mid ah ma istaagin jidka of file mid kordhin la fadilay kuwii kale oo badan, sida badan waan arki doonaa.
Qeybta 1: MKV vs MP4, Faraqa u dhexeeya MKV iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MKV
Developer MKV ay taageereen urur aan macaash-ka France laakiin aasaasay Steve Lhomme by. Boqortooyada-free heerka A furan oo xor u yahay in la isticmaalo iyo tafaasiil farsamo ayaa diyaar u ah isticmaalka gaarka loo leeyahay iyo ganacsiga, koox horumarinta MKV Ruqsooyinka maktabadaha hoos LGPL ah. The MP4 qaab weelka waxaa sameeyay simayo hay'adda Muhaajiriinta Caalamiga ah (ISO) oo la sameeyey si ay u taageeraan tiro balaadhan oo ah ciyaaryahan warbaahinta oo ay la socdaan qalabka warbaahinta kala duwan. Tani waa qaab la jaan qaada xad dhan default ciyaaryahan warbaahinta.
Taariikhda Mashruuca ayaa lagu dhawaaqay 6 December 2002 sida fargeeto ah oo ka mid ah Qaabka Warbaahinta Container, ka dib markii khilaafka u dhexeeya sameeysa MCF hogaanka Lasse Kärkkäinen iyo ugu dhakhsaha badan-ka-ahaan ah aasaasaha MKV Steve Lhomme ku saabsan isticmaalka Extensible Binary Meta Language ah (EBML) oo ah halkii a qaab binary. Tani waxay ku soo beegantay iyada oo fasax dheer sireed ay MCF ee sameeysa hogaanka, inta lagu guda jiro taas oo inta badan bulshada si deg deg ah u guuray mashruuca cusub. Sanadkii 2010, waxaa lagu dhawaaqay in qaab WebM audio / video waxaa saldhig u lahaa on a profile of qaab MKV weelka si wadajir ah ula VP8 video iyo Vorbis audio. October 31, 2014, Microsoft ayaa xaqiijisay in Windows 10 taageeri doonaa HEVC iyo MKV. Iyada oo ku saleysan si toos ah uga Qaabka File QuickTime, MP4 ama MPEG-4 (U soo guurista Picture Expert Group-4) kordhin file ayaa la sameeyey si ay u taageeraan Descriptors UJEEDDO horudhac ah oo ay la socdaan hawlaha kale ee MPEG. Iyadoo qayb ka ah qaab file warbaahinta saldhig ISO ayaa, MP4 markii ugu horaysay la sii daayay sanadkii 1999, waxaana uu tan iyo markii la soo hagaagtay oo la casriyeeyay dhawr jeer ilaa ay dib-u-sii daayo 2003, sixitaanka ay version final sidoo kale version in uu hadda ku jiraa isticmaalaan qeybo badan dunida. Gol leeyahay dambeeyay MP4 ayaa waxa uu yahay xawaaraha loading qaybsama. Files MP4 sidoo kale lagu meel kasta heli karaa, haddii la ilaaliyo.
Caanka MKV caan ku tahay xawaaraha loading dhakhso qaybsama, kaas oo u ogolaanaya in ay ka abaalmarin weyn xajmi videos waqti gaaban. MKV waxaa sidoo kale filaayo in ay ku shuban video iyo playbacks audio ilaa 1080p, samaynta MKV file kordhin caansan ka mid ah taageerayaasha movie qoon gaystay. Files MP4 Multiple badbaadi kara iyo dulfuulan galay mid ka mid file keli, taas oo ah sababta ugu fiican loogu yaqaanaa shaqo fudud lagu badbaadiyo. Noocan ah qaab weel sidoo kale waa ay fududdahay in la soo guuriyeen, dhaqaaqay iyo uploaded, taas oo ay heli karaan dadka isticmaala balaadhan oo ah Qalabka telefoonada gacanta.
Durdurrada Data Tan iyo MKV xamili karaan tirada file weyn waqti haya'ad gaaban, files MKV waxaa lagu yaqaan in ay taageeraan badan oo geeyo xogta. Abuuritaanka casriga ah, dabacsan, extensible, qaab cross-madal weel multimedia ah; Horumarinta taageero geeyo adag; Dhisidda nidaam menu la mid ah in ka mid ah DVD-yada ku salaysan EBML; Horumarinta set oo ah qalab loogu talagalay Abuuridda iyo tafatirka ee files MKV; Horumarinta maktabadaha oo loo isticmaali karo in ay u oggolaadaan horumarinta in lagu daro taageerada MKV codsiyada ay; La shaqaynta saarayaasha hardware si loogu daro taageero MKV in qalabka multimedia gundhig; La shaqeynta si ay u bixiyaan MKV hooyo; Taageerada in nidaamyada kala duwan ee hawlgalka iyo dhufto ee hardware. Kaydinta xogta iyada oo durdurrada ee gaarka loo leeyahay, macluumaadka geeyo faylasha MP4 caadi gubay galay track gaar ah in si gooni ah waxaa ka mid ahaa. Bogga internetka ee diwaangelinta rasmi ah MP4 ayaa ku qoran oo dhan ciyaaryahan warbaahinta socon iyo qalabka warbaahinta u codecs MP4. Durdurrada xog dheeraad ah oo la taageeray waxaa ka mid ah MPEG-4 qaybaha 10 iyo 2, sireed Advanced Audio iyo Audio sameecadda ah iyo sidoo kale MPEG-4 lagu tiriyaa Text ujeedooyin subtitling.
Metadata A is-sharxaya xogta, metadata sharxayaa faahfaahin ku saabsan qoraaga iyo codsiyada in la isticmaalayn. Sida MP4 oo si cad loo isticmaalo weel file qaab kale oo loogu tala galay in la isticmaalo guud, metadata kordhinta file MKV haayo file database taasi oo sida badan la kordhin file database a calaamad u tahay, iyo sidoo kale in la furi karo iyadoo barnaamijyadooda ku qorista. Xogta sharaxaad iyo dhisme ah in sharxi kara tiro ka mid ah faahfaahinta ku saabsan xogta laftiisa, metadata sheegayaa macluumaad ku saabsan sida xogta la abuuray, waxa ujeedooyinka macluumaadka ku jira oo ay la socdaan macluumaad ku saabsan abuuraha ama qoraaga xogta. Info Tani waxaa lagu hayaa loona maamulaa database ah ee xogta, loo yaqaan diiwaanka metadata ama bakhaar metadata. Metadata waa in laga heli qaab document text akhriska fudud.
Faa'iido 1 - taageertaa H.264 / AVC u mug HD loo maqli content
2 - taageertaa luxay Blu-ray iyo HD videos loo maqli
3 - ayaa taageero fiican u muuqaalada qaar ka mid ah sida subtitles, video badan oo kuwan raadkaygay audio iyo cutubyada 1 -multiple MP4 files waa u fududahay in ay badbaadin
2 - files waaweyn ama gooni ah la badbaadin karaa mid file hal filim
3 - files MP4 waa user dheeraad ah oo saaxiibtinimo la eego koobiyeynta, dhaqaaqin iyo koombiyuutarka
Qasaarooyinka 1 - Faylal ay ku badbaadi waa weyn.
2 - muuqaalada dheeraad ah u baahan tahay waxaa laga yaabaa in qalab dheeraad ah iyo codsiyada.
3 - Isticmaalka qaab file oo kala duwan u qaababka kala duwan ee videos (.MK3D u stereoscopic video, .MKA u maqal ah oo kaliya files, iyo .MKS u subtitles) . 1 - Qaraarka ugu MP4 waa 1440x1080 / 30p (16: 9).
2 - channel Audio iyo inta jeer raystay waa kaliya laga heli karaa 2 channels / 48 kHz.
3 - MP4 isticmaalaa MPEG-4 AAC LC codec audio, taas oo hoos u ah adayga codec.
U isticmaala in ay Dadka ku adkaysato tayada sawirada iyo sidoo kale xawaaraha sare ee haya'ad marka ay timaado loo maqli karo video baaxad weyn. Dadka isticmaala inta badan waxay door bidaan files MP4 qaab weel taasi ay sabab u tahay in sharcigaasi waafaqsan sare ciyaartoyda warbaahinta iyo qalabka, waxaa ka mid ah dadka jecel filimada daawashada on gaymamka ayaa sida X-Box 360 oo PS4.
Related links 1. Download DVD Converter
2. .MKV File Extension 1. .MP4 File Extension
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MKV?
MP4 iyo MKV jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo MKV isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo MKV video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama MKV inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya file MP4 ama MKV in aad rabto in aad kala soo bixi ka. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli kartaa ugu fiican MP4 tayada iyo MKV files.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 ay u noqon MKV adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "MKV".
Talaabada 5 Play faylka MKV bixi
> Resource > MP4 > MKV vs MP4, Faraqa u dhexeeya MKV iyo MP4